के बिहे गर्नैपर्छ? :: Setopati
कान्ति न्यौपाने असोज ७
अझ कतिपय त केटाको फोटो, घरकुल खान्दानको कुरासहित आइपुग्छन्, हाँसेर टार्नु बाहेकको विकल्प हुँदैन।
नेपाली समाजमा मंसिर महिनालाई विशेषगरी बिहे गर्ने महिनाको रूपमा लिइन्छ। बिहे गर्ने उमेर भएका युवायुवतीलाई मंसिर लाग्यो भन्यो भने बिहे गर्ने बेला भयो भन्ने संकेत गरेको बुझिन्छ।
अझ अलिक पहिलासम्म त साउन, भदौ, असोज कात्तिक लगायतका महिनाहरूमा बिहे गर्ने प्रचलन नै थिएन, केही आकलझुकल भए पनि त्यसलाई राम्रो मानिँदैनथ्यो, तर, अहिले भने १२ महिना नै बिहे गर्ने प्रचलन सुरू भइसकेको छ। आवश्यकता र इच्छा अनुसार बिहे गर्ने प्रचलन पनि बदलिँदै गइरहेको छ।
तर, समाजको चिन्तन र बेलैमा बिहे नगरे घरबार, बालबच्चा हुँदैन भन्ने चलनका कारण भएका विवाहले सम्बन्धविच्छेदका घटना पनि उत्तिकै घटेका छन्।
खासगरी नेपाली समाजमा केटा मान्छेको भन्दा पनि केटी मान्छेको विवाहका लागि भने हतार गर्ने चलन छ।
अझ पहाड र तराईतिर भने छोरी मान्छे २० वर्ष कटेपछि विवाह गरिदिनै हतार हुन्छ। उसको लागि राम्रो ज्वाइँ खोजिदिने अनि जे गर्छे उसकै घरमा गएर गर्छे भन्ने परम्परागत मान्यताबाट टाढा जान सकेको छैन समाज। जसले गर्दा राम्रो लेखपढ गर्ने केटी मान्छेहरू पनि बिहेपछि घरगृहस्थीमै सीमित हुन्छन्।
किनभने अझै पनि समाजले छोरी मान्छेको संसार घरगृहस्थी, परिवार, श्रीमान र बालबच्चाबाट बाहिर पनि छ भनेर सिकाउनै सकेको छैन।
शिक्षित परिवारमा पनि विवाहपछि श्रीमतीले घर सम्हाल्ने र श्रीमानले पैसा कमाएर ल्याउने भन्ने परम्परागत सोच बदलिन सकेको छैन। जसले गर्दा कतिपय छोरी मान्छेको पढाइ माटोमै गएर मिल्ने गर्छ।
यही प्रसंग जोडिरहँदा मलाई मसँगै पढ्ने एक जना मेहनती केटी साथीको याद आयो। जो परिवार र समाजको दबावका कारण भविष्यलाई नै दाउमा लगाएर विवाह गरी गृहिणीमा मात्रै सीमित हुन पुगेकी थिई।
बिएस्सी साइन्स पढेकी ऊ सानैदेखि दोस्रो हुन जानिन। कक्षामा पनि अति मेहनती ऊ पढेर केही बन्छु केही गर्छु भन्ने दृढ संकल्प राख्थी, हामीलाई समेत हौसला दिन्थी तर, पढाइ पूरा नहुँदै २१ वर्षमै उसको विवाह भयो।
२ वर्षपछि उसको बच्चा जन्मियो, घरमा सासू ससुरा बिरामी उनीहरूको स्याहार गर्नुपर्‍यो। यही गर्दै उसको पढाइ माटोमै मिलेको थियो। बेलाबेला ऊ गुनासो गर्थी, ‘मैले चाँडै पढेर गल्ती गरें, त्यत्ति मेहेनत गरेर पढेको अहिले बच्चा र बुढाबुढीको स्याहार गर्नबाहेक केही गर्न काम लागेन, अब म ती सर्टिफिकेट आगो लगाइदिन्छु के अर्थ ती व्यवहारमा प्रयोग नभएका राम्रा नम्बरहरूको, मेरो त जे भयो भयो, हतार गरेर विवाह नगर है।’
माथि मैले उल्लेख गरेजस्तै हजारौ क्षमतावान केटी मान्छेको काम बिहे गर्ने, गृहणी गर्ने अनि घरव्यवहार सम्हाल्नेबाहेक हुनै सकेको छैन।
यसको दोष केटी मान्छेको भन्दा पनि अलिकति उमेर बढ्नासाथ बिहे गर्नुपर्छ भनेर दबाव दिने समाजको हो, त्यसखालका चिन्तनको हो।
जति पनि परिवर्तन, समानता र समृद्धिका कुरा गरे पनि परिवार वा समाजले कहिले पनि छोरी मान्छेलाई ‘मान्छे’ बन्न सिकाएन, केही गर्न प्रेरित नै गरेन, हौसला, विश्वास र आत्मविश्वासी बन्न नै सिकाएन, बरु यो सिकायो उमेरमै अर्काको घरमा जानुपर्छ, अनि परिवारका सबै सदस्यको अन्डरमा रहेर काम गर्नुपर्छ।
सबैको सम्मान गर्नुपर्छ, घरगृहस्थीका सम्पूर्ण काम राम्रोसँग जान्नुपर्दछ अझै पनि समाजको सिकाइ यही हो छोरी मान्छेको लागि। अनपढ, अशिक्षित हुँदा त घरव्यवहारको काम सिकाउनु पनि ठिकै थियो होला स्नातक, स्नातकोत्तरसम्म पढेकी छोरीलाई समेत ढुंगेयुगका छोरीलाई जसरी अर्काको घरमा गएर सेवा गर्न सिकाएपछि कस्तो समाजको कल्पना गर्न सकिएला!
अहिले पनि नेपाली समाजमा हामीले अध्ययन गर्‍यो भने धेरै बावुआमाले पढाइ सक, केही गर, अस्तित्व सहितको मानिस बन् अनि विस्तारै बिहे गरौंला भनेर कहिल्यै प्रेरित नै गर्दैनन्।
बरु उनीहरूलाई यही चिन्ता हुन्छ राम्रो ज्वाइँ कहाँबाट खोज्ने? ज्वाइँ राम्रो भए त छोरीले किन जागिर खानुपर्‍यो अनि ज्वाइँका लागि मापदण्ड हुन्छन्, अष्ट्रेलिया, अमेरिका वा युरोपियन मुलुकतिर भएको, नेपालमा भए सरकारी जागिर खाने, वा काठमाडौंमा टन्न धनसम्पत्ति भएको कुलघरानको छोरो यस्तै यस्तै।
अनि त्यसो भए व्यक्तिगत संस्थामा जागिर खाने केटा मान्छेहरू सबै अयोग्य हुन्? कि विवाह गर्ने हरेक युवकले सरकारी जागिर, अष्ट्रेलिया, अमेरिका वा युरोपियन मुलुकतिर जानैपर्ने हो ?
छोरीको लागि राम्रो कुलघरान र धनी ज्वाइँ खोज्ने समाजले छोरीलाई भने आफ्नै खुट्टामा उभिनै सिकाएन। ज्वाइँ राम्रो खोज्नुभन्दा वा विवाह गरिदिन हतार गर्नुभन्दा छोरीलाई सक्षम बनाएर केही गर्न प्रेरित गरेरमात्रै विवाह गराइदिने हो भने छोरीलाई मात्रै होइन, बावुआमालाई समेत धेरै सहज हुन्थ्यो।
कथन नै पनि छ, एउटी महिला शिक्षित भइन् वा सक्षम भइन् भने संसार नै शिक्षित हुन्छ परिवर्तन हुन्छ। त्यही कथनलाई आधार मान्ने हो भने पनि एउटी छोरीलाई छोरीबाट बुहारी बनाउनुभन्दा पहिला सक्षम बनाउनु आवश्यक छ।
तर, यहाँ त २० वर्ष कटेका छोरीहरूको त बिहे गराइदिनै हतार हुन्छ। सक्षम र स्वाबलम्बी नागरिक बन्नुभन्दा नि पहिल्यै बुहारी बन्न दबाव दिइन्छ।
माथि उल्लेख भएका विषयवस्तुले छोरी मान्छे, केही गर्न सक्दैनन्, गरेका छैनन्, अवसर नै पाएका छैनन् भन्ने उठान गरेको होइन, नेपालका कैयौं महत्वपूर्ण निकायहरूमा हाल पनि कसैका छोरी, कसैका बुहारी वा कसैका श्रीमतीको महत्वपूर्ण सहभागिता छ।
अझ युरोपियन देशमा त राज्यको कार्यकारी प्रमुखमा महिला नै रहेका छन्। जसले के प्रष्ट बनाउँछ भने छोरीमा क्षमताको होइन, अवसर, प्रेरणा, हौसला र आत्मविश्वासको कमी छ।
हरेक परिवारले छोरीलाई छोरी नभई बुहारी बनाउनमै हतार गर्छन् भन्ने होइन, तर नेपाली समाजमा अझै पनि धेरै आमाबाबु र आफन्तहरू छोरीलाई बुहारी बन्नमात्रै प्रेरित गर्छन्, स्वावलम्बी बन्नै सिकाउँदैनन्, शिक्षामा लाखौं लगानी गरेर शिक्षित बनाउँदा समेत उनीहरूलाई आफ्नी छोरी कुशल गृहणी, कुशल बुहारी र कुशल श्रीमती नै बनोस् भन्ने नै सोच्छन्।
तर, हरेक छोरीहरू उत्तिकै क्षमतावान्, उत्तिकै कुशल र सक्षम हुन्छन् भन्ने पनि होइन, कतिपय त घरगृहस्थीमै सीमित हुन रमाउने पनि हुनसक्छन्, उनीहरूलाई प्रेरित गर्नेहरू हुँदै पनि नगरेका हुनसक्छन् तर, अधिकांश शिक्षित छोरीहरूको हकमा भने विवाहसम्बन्धी समाजको मनोवृत्ति नै लागू हुन्छ।
विवाह जीवनको अनिवार्य पाटो भए पनि अपरिहार्य भने होइन, केही गर्छु भन्नेका लागि विवाहबन्धन बाधक बनिदिँदा धेरै प्रतिभाशाली क्षमताहरू सेलाएर जाने गरेका छन्।
तर केहीले भने विवाहपछि पनि श्रीमान वा परिवारको सहयोगमा आफ्नो नाम राखेका छन्। केही बनेर केही गरेर देखाएका छन्, ती भनेका केही अपवाद केस हुन् अधिकांशका हकमा भने छिटो विवाह र छोरीलाई बुहारी मात्रै बनाउने सामाजिक मनोवृत्तिका कारण प्रतिभा र चाहनाहरू ओइलिएर गएका छन्।
तसर्थ, बिहे कहिले गर्ने भनेर सोध्नु पहिले केही बन्न वा केही गर्न प्रेरित गर्नुस्, के गर्‍यो वा गर्दैछौ भनेर प्रश्न गर्नुस्।
छोरीलाई बुहारीभन्दा पहिले सक्षम नागरिक बन्न प्रेरित गरौं।
(यो लेख सेतोपाटीमा पहिलोपटक २०७७ मंसिर १३ गते प्रकाशित थियो)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ७, २०७८, १४:४०:००